XAWAASHKA LAGA IIBSADO DAAQADAHA: SIDA LOO KORO OREGANO GURIGA - KALLUUNKA
Ugu Weyn Ee Kalluunka
Kicinta oregano (oregano): beeritaanka iyo daryeelidda warshadda guriga
Oregano ama Oregano - geedo-baako-dallac dilaac ilaa 60 cm sare, caleen, caleemo khafiif ah, timaha ayaa koraan saldhiga. Oval oo caleemo leh caleemo caan ah ayaa koraan labada lammaan, midba midka kale oo ku yaal gooyn yar. Ubaxyo yaryar oo lakac ah ama midab cad oo ah qaabka gaashaan-baxa leh ee sida gogosha leh. Waxyaabaha kiimikada ah ee oregano waxaa ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah, fitamiinada C iyo B6, antioxidants iyo fareeshka, taas oo ay ugu wacan tahay dhirta ay leedahay caraf cad oo quruxda leh.
Ma suurtagal in la koro oregano on windowsill ah
Oregano - geedka aan la qabin oo si wanaagsan u kora labadaba berrinka bannaan ee beerta, iyo weelka daaqadaha ee windowsill ee xaaladaha guriga. Caleemaha iyo jirridda oregano waxaa badanaa loo isticmaalaa karinta iyo ujeedooyinka daawooyinka. Adiga oo dhirta duurjoogta ah ku darsaday dheriga guriga, waxaad qoyskaaga siin doontaa raashin cusub oo loogu talagalay koorasyada koowaad iyo kan labaad iyo shaaha daawada, iyo hoygaaga waxaa ka buuxsami doona ari ah oo qurux badan oo ari ah, oo si dabiici ah looga nadiifiyo bakteeriyada.
Sida loo abuuro shuruudaha korriinshaha koraya
Inaad xiiseyneyso dhadhanka macaan ee oregano ee suxuunta la kariyey iyo saamaynta bogsashada leh, qaar badan ayaa ku fekeraya sida kor loogu qaado oregano guriga. Nidaamka sii kordhaya ma ahan mid aad u adag, waxa ugu muhiimsan waa in la diyaariyo weel si loogu beero oregano iyo meel daaqadaha ka baxsan, oo sii kordhaya iyo daryeelidda warshad adag maahan haddii aad raacdo talooyinka soo socda.
Waa muhiim! Marka ilaalinta khudradda xilliga jiilaalka, ku dar qiyaas yar oo khudradda marinada ah, tani waxay ku dari doontaa dhadhan dareere ah waxayna kordhineysaa waqtiga kaydinta.
Waa maxay heerkulka korriinka
Oregano - warshad qabow u adkaysta, waxay u dulqaadataa heerkulka heerkulka. Heerkulka ugu fiican ee germinating abuurka ah oregano + 18 + 20 ° C, waa heerkulka taas oo ah in la sii hayo ilaa biqilka. Ka dib markii geedo ku koraan ilaa 3-4 cm, weelka beerto ayaa la beddeli karaa meel joogto ah, xayawaanka koraya ee aan u baahnayn in la joogteeyo heerka heerkulka qaarkood.
Doorashada iftiinka cawska
Oregano waa mid aad u iftiimaya, dherer leh dhirta cawska hareeraheeda ah waxaa lagu dhejiyaa daaqada qorraxda, oo la doorbidaa dhinaca koonfureed. Xilliga dayrta-xilliga qaboobaha, waxaa lagu talinayaa in laydhka iftiinka marar badan laga soo qaado qolka oregano koraayo, horumarka wanaagsan ee dhirta.
Sida loo abuuro abuurka oregano at home
Geedaha oregano ee koriinka miraha at guriga ayaa si fiican loo qabtaa March iyo April. Abuurka Oregano waxaa lagu iibiyaa goobo badan oo takhasus leh, way fududahay in la helo. Marka la beero geedo oregano isticmaalka qiyaastii 0.1 g halkii mitir oo laba jibbaaran. M. Dhamaantood waxay u muuqdeen inay yihiin kuwo duufaan ah si loo soo saaro, haddii kale qoyan ayaa afkeedu adkaadaa, oo mar dambe ma cuni karaan.
Si si fudud u kori karo oregano ka soo abuur, waxaa lagu talinayaa in miraha lagu beeray biyo diiran laba maalmood ka hor laga beerto. Marka qallajinta abuurka, waxaa lagama maarmaan ah in la cusbooneysiiyo biyaha ugu yaraan afar jeer hal maalin, tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka saarto saliidaha lagama maarmaanka ah ee abuurka, taas oo kor u qaadi doona biqilka dheeraad ah.
Way adagtahay in la beero miraha yar yar ee dhirta, sidaas awgeed waa suurtogal in la isku daro ciid ah oo lagu daro sariiraha diyaarka leh ee isku dar ah. Habkani wuxuu siinayaa ciid ah oo isku mid ah oo lagu duubo ciidda. Marka beeritaanka abuurka ee dheriyo shakhsi ahaan, 2-3 abuur waa in lagu beeray mid kasta oo weelka si qoto dheer ah 5 mm.
Go'aaminta inaad jilciso oregano gudaha, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u habeyso degitaanka guriga. Halka hoose ee taangiga waxaa lagu daboolay lakab dhogag oo ah 3 cm - waxay noqon kartaa vermiculite ama perlite, ka dibna isku dar ah ciidda caan ah ama substrate peat ah ee acidity dhexdhexaad ah ayaa lagu shubay, noocyada ciidda bacaadka loo isticmaali karaa.
Ma taqaanaa? Shaah Oregano waxay kordhisaa rabitaanka cuntada.
Doorashada karti-gelinta dhulka
Oregano waxay leedahay nidaam xidid dheer, Sidaa darteed, kartida beeritaanka tufaaxani waa inay ka qoto dheer tahay dhirta kale. U hubso inaad isticmaasho weelka beeraha oregano leh godadka dheecaanka iyo lakabka godadka 1-2 cm oo dhagxaan ama dhagax la jajabiyey si looga fogaado qoyaan dabacsan oo ku dhex jira ciidda iyo xoqan xididdada.
Beerta loo diyaariyay oregano (buuxi tuubo leh dheecaan) waxaa lagu qoyaa dhalada buufin, ka dibna miraha waxaa lagu beeray kareemada 10-15 mm oo qoto dheer, kaas oo la rusheeyaa lakabka dhulka aan ka badnayn 10 mm. Ka dib markii la beero, ciidda ayaa mar kale qoyaan leh atomizer, iyo weelka waxaa lagu daboolay filim si loo abuuro isku dhirta lagu koriyo.
Dhowr jeer toddobaadkii waxaad u baahantahay in aad hawada ku gasho cawska cawska udgoon, ka saarista filinka dhowr saacadood subaxda ama fiidkii. 14-20 maalmood ka dib markii beero geedo u muuqdaan, ka dib markii filimka ugu dambeyntii laga soo saaro weelka leh oregano.
Maaha mid aad u adag in la daryeelo oregano, waxay u baahan tahay dareen dheeraad ah ka badan geedo caadiga ah ee khudaarta ama ubax qolka. Waraabinta, jaridda dhirta, quudinta - damaanad ah koritaanka fiican ee geedo udgoon. Waraabinta waa in ay ahaato mid dhexdhexaad ah, laga bilaabo qoyaanka qoyaanka qoyaanka xawaashka ah ka bilowdo kallana, kaas oo keenaya dhimashada geedka oo dhan. Xilliga ciidda ayaa si wanaagsan u saameynaya xaaladda guud ee dhirta; way sii kori doontaa.
Waa muhiim! Urka oregano ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso balanbaal, baranbaro iyo jiirka.
Xeerarka daryeelka dhalidda
Mar mar, geedo u baahan tahay in la duubo oo si waraab ah u waraabiyo, waxaa fiican in lagu waraabiyo buufin. Ka dib muuqaalka caleemaha ugu horreeya, filimka ayaa ugu dambeyntii laga saaraa, sariiraha oregano way qafiifaan, ka tagaan geedo caafimaad leh oo caafimaad leh. Waraabinta waa inay ahaato mid ku filan oo joogto ah. Ka dib markii oregano koraayo ilaa 60-70 mm, duurka u yihiin beeray ubaxyo qoto dheer oo qoto dheer leh mugga ah oo ku saabsan 3 litir meel ah koritaanka joogto ah.
Sida loo daryeelo warshad qaangaar ah
Sida aad arki karto, beerashada oregano at guriga ma aha mid aad u adag. Waxaa intaa dheer, waxaa muhiim ah in aad taxaddar u yeelato daryeelka ee warshad qaangaar ah. Dushitsa si fiican ayaa loo waraabiyaa 1-2 jeer toddobaadkii, ka furfuray ciidda iyo jaray taajkii baadiyaha si qaab la aqbali karo. Marka waraabiyo waxa ugu weyn - ha u ogolaan qoyaan xad dhaaf ah si looga fogaado kallana root. Wixii horumarinta wanaagsan ee warshadda ee aqalka, waxaa lagula talinayaa in lagu quudiyo dhirboolo leh Bacriminta organic for dhirta indoor laba jeer bishii.
Siyaabaha kale ee habka taranka
Waxaad ku dhufan kartaa dayrta xilliga dayrta ama gu'ga iyada oo loo qaybinayo baadiyaha. Si arrintan loo sameeyo, dhirta waxaa laga saaraa dhulka iyo kala qaybsan si ay rhizome kasta beerto lahaa caleemaha. Rootiida Root waa la baari karaa iyada oo la jajabiyey kookada firfircoon. Qeybaha kala duwan ee oregano waxaa lagu beeray ciid ballaaran oo la waraabiyey oo ay marka hore ka waraabinayaan, ka hortagaya ciidda ka soo qalajinta. Korniinka caleemaha yar yar waa calaamad muujinaysa dhalashada guusha ee cawska.
Ma taqaanaa? Geedo qoyan oo la qalajiyey ayaa aad u macaan leh oo cusub.
Goorta iyo sida loo ururiyo oregano
Sida aan hore u ogaanay, dhirta oregano waxaa lagu kori karaa guriga, siinta beeritaanka tayo sare leh iyo daryeel wanaagsan. Stems oregano waxay kori kartaa ilaa mitir dheer. Laga soo bilaabo Julaay ilaa Sebtembar, dhirta ayaa ugu badan oo udgoon. Dib u soo celinta dusha dhulka 5-7 cm, caleemaha oregano waa la gooyaa, ka dibna la qalajiyey qol hawo leh. Oregano ayaa lagu kaydiyaa dhalooyinka la shaabadeeyey ama sanduuqyada meelaha mugdiga ah oo aan ka badnayn laba sano.
Sidee Kaabashka Romanesco waxtar leh iyo sida loo si guul leh u koraan?
Waxyaabaha cusub ee taranta taranka: Tamaandhada, Petrushka, beerta
Inta badan aan caadi ahayn qoyska Solanaceae - yaanyo "Lugaha Banana"
Sida loo wajaho cayayaanka shimbiraha
Xakameyn wax ku ool ah ee kufilashada ubax kufin
Sharaxaad buuxda ee daroogada "Immunocytofit" iyo tilmaamaha isticmaalka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kalluunka 2020